စမတ် linear လျှပ်စစ် actuator ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လျှပ်စစ် Actuator > linear လျှပ်စစ် Actuator > စမတ် linear လျှပ်စစ် actuator
Ingress ကာကွယ်မှု: IP67 (IP68 optional ကိုဖြစ်ပါတယ်)
ယန္တရားဖော်ထုတ်မယ်1ï¼ Valve အနေအထား
AOX-L ကိုစီးရီးစမတ် linear လျှပ်စစ် actuator ၏မော်တော်2ï¼
AOX-L ကိုစီးရီးစမတ် linear လျှပ်စစ် actuator များအတွက်3ï¼ Terminal နှင့်ပိတ်ပင်တားဆီးမှု
နွေဦးကိုယ့်ကိုယ်ကို အသုံးပြု. သီးခြားလျှပ်စစ်ဝိုင်ယာကြိုးအခန်း Installed - type ကို terminal ကိုကြံ့ခိုင်ခြင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောသေချာ
1. ရှိပါတယ်ကောင်းသောညှိနှိုင်းမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုသေချာဖို့ AOX-L ကိုစီးရီးစမတ် linear လျှပ်စစ် actuator နှင့်ညှိနှိုင်းမှုယန္တရားအပေါငျးတို့သအဆစ်မှာအဘယ်သူမျှမဖြည်ရှင်းလင်းရေးဖြစ်သင့်, နှင့်ဆက်သွယ်မှုမူလီအညီအမျှနဲ့အချိုးကျတပ်ဆင်ခစဉ်အတွင်းတင်းကျပ်ရပါမည်။
နည်းဥပဒေကို manual ကိုဖတ်ခြင်းနှင့်စစ်ဆေးနှင့်သတ်မှတ်ထားသောစစ်ဆေးရေးနည်းလမ်းအရသိရသည်အတည်ပြုရန်ဂရုတစိုက်, အ AOX-L ကိုစီးရီးစမတ် linear လျှပ်စစ် actuator ကိုသုံးပြီးခင်မှာ3။ လျှပ်စစ် actuator စစ်ဆင်ရေးထဲသို့သွင်းထားခြင်းဖြစ်သည်မီ, ထို site မှာ power supply ဗို့အားအဆိုပါစည်းမျဉ်းများနှင့်အညီရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, သတ်မှတ်ထားသောလျှပ်စစ်တပ်ဆင်ဝါယာကြိုးပုံမှအတိုင်းဝါယာကြိုးစစ်ဆေးပါ။ ဝါယာကြိုးများနှင့်တစ်ဦးချင်းစီ Terminal ကို၏ဝါယာကြိုးမြဲမြံစွာဖြစ်သင့်အခါဝါယာကြိုးအရေအတွက်အာရုံစိုက်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ, ထိုကဲ့သို့သောစသည်တို့ကို IS09001, ISO14001, အီး, ATEX, gost, EAC, SIL3, IP68, Cu-TR, ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်-အထောက်အထားအဖြစ်အမျိုးမျိုးသောပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံခြားအောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန်ရရှိသောအပြည့်အဝကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်အပြည့်အဝကိုနိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ကိုက်ညီကြောင်းပြသရာဖြစ်ပါတယ် နှင့် AOX-L ၏အရည်အသွေးစီးရီးစမတ် linear လျှပ်စစ် actuator အာမခံချက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဖြေကျနော်တို့ Manufactory Ruian, Zhejiang ပြည်နယ်, တရုတ်, အနှစ် 20 ကျော်အဘို့အ AOX-L ကိုစီးရီးစမတ် linear လျှပ်စစ် actuator အတွက်အထူးပြုနေကြသည်။
မေး: ငါတို့သည် AOX-L ကိုစီးရီးစမတ် linear လျှပ်စစ် actuator အဘို့သင့်အေးဂျင့်ဖြစ်နိုင်သလား?
hot Tags:: စမတ် linear လျှပ်စစ် actuator, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်